HPV ကာကွယ်ဆေးအသစ် : ကင်ဆာရောဂါကို ပိုမိုတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း
AM - AmharicAR - العربيةDE - DeutschEN - EnglishID - BahasaJP - 日本語KH - CambodiaVN - VietnamZH - 中文(简体)TH - ไทย
ပင်မစာမျက်နှာကျန်းမာရေးအချက်အလက်ဇန်နဝါရီလ 2021HPV ကာကွယ်ဆေးအသစ် : ကင်ဆာရောဂါကို ပိုမိုတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း
դեկտեմբերի 31, 2020 CancerScreeningCervicalCancerCervicalCancerVaccineCo-TestingHPVHPVVaccinePap-SmearWomen-Disease
HPV ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?
9-Valent HPV ကာကွယ်ဆေးဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?
ဤကာကွယ်ဆေးသည် မည်သည့်အရာများ ကာကွယ်ပေးနိုင်သနည်း?
ဤကာကွယ်ဆေးသည် မည်သူ့အတွက် သင့်လျော်သနည်း?
ကာကွယ်ဆေး မည်ကဲ့သို့ ထိုးပေးသနည်း?
ကျွန်ုပ်သည် 2-Valent သို့မဟုတ် 4-Valent ကာကွယ်ဆေး သုံးကြိမ်ထိုးပြီးပါက ဤကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါသလား?
လူများအား ရောဂါဖြစ်စေသောဗိုင်းရပ်ပိုး (Human Papillomavirus) မျိုးကွဲပေါင်း တစ်ရာကျော်ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက်မှ ၄၀ သည် လူများအား ဖျားနာမှု ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ HPV မျိုးကွဲ ၆ နှင့် ၁၁ သည် လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ ဖြစ်ပွားသည်ဟု သိရှိကြပြီး မျိုးကွဲ ၁၆ နှင့် ၁၈ သည် စအိုကင်ဆာနှင့် လိင်အင်္ဂါကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုများနှင့် အလွန်ဆက်စပ်နေသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် HPV ရောဂါကူးစက်ခြင်းအတွက် ဆေးဝါး သို့မဟုတ် ကုသမှု မရှိသေးပါ။ သို့သော်လည်း HPV ရောဂါကူးစက်မှုကို အစပိုင်းမှစတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ထိရောက်စွာကာကွယ်ရန် ကာကွယ်ဆေး ရှိသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဤကာကွယ်ဆေးများမှ နှစ်မျိုးကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရရှိနိုင်သည်။
2-valent HPV ကာကွယ်ဆေး (မျိုးကွဲ ၁၆ နှင့် ၁၈ ကာကွယ်ပေးသည်)
4-valent HPV ကာကွယ်ဆေး (မျိုးကွဲ ၆၊ ၁၁၊ ၁၆ နှင့် ၁၈ ကာကွယ်ပေးသည်)
သတင်းကောင်းမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဗိုင်းရပ် မျိုးကွဲ ၉ မျိုး ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် HPV ကာကွယ်ဆေး အသစ် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ယခင်က တစ်ခါမျှမရှိခဲ့သေးသော ကာကွယ်နိုင်မှုအဆင့် ပိုမိုမြင့်မားလာသည်။
ယခင် 4-Valent ကာကွယ်ဆေးမှတီထွင်ထားပြီး 9-Valent HPV ကာကွယ်ဆေးကို ဗိုင်းရပ်ကဲ့သို့သော အမှုန်အမွှားများမှ စီစဉ်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အသက် ၉ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အကြား အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ အတွက် မျိုးကွဲ ၆၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၃၊ ၄၅၊ ၅၂ နှင့် ၅၈ များကို ကာကွယ်ပေးသည်။
9-Valent HPV ကာကွယ်ဆေးသည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် အောက်ပါတို့ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
အသက် ၉-၄၅ နှစ် အမျိုးသမီးများ အသက် ၉-၄၅ နှစ် အမျိုးသားများ
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ မိန်းမအင်္ဂါဇာတ် ကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါကင်ဆာ၊ စအိုကင်ဆာ၊ ခံတွင်းကင်ဆာနှင့် လည်ချောင်းကင်ဆာ (HPV မျိုးကွဲ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၃၊ ၄၅၊ ၅၂ နှင့် ၅၈ မှ)
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ မိန်းမအင်္ဂါဇာတ် ကင်ဆာ၊ မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါကင်ဆာ၊ စအိုကင်ဆာ များ၏ ကင်ဆာရှေ့ပြေးရောဂါများ (HPV မျိုးကွဲ ၆၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၃၊ ၄၅၊ ၅၂ နှင့် ၅၈ မှ)
လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ (HPV မျိုးကွဲ ၆ နှင့် ၁၁ မှ)
စအိုကင်ဆာ၊ ခံတွင်းကင်ဆာနှင့် လည်ချောင်း ကင်ဆာ (HPV မျိုးကွဲ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၃၊ ၄၅၊ ၅၂ နှင့် ၅၈ မှ)
စအိုကင်ဆာ၏ ကင်ဆာရှေ့ပြေးရောဂါများ (HPV မျိုးကွဲ ၆၊ ၁၁၊ ၁၆၊ ၁၈၊ ၃၁၊ ၃၃၊ ၄၅၊ ၅၂ နှင့် ၅၈ မှ)
9-Valent HPV ကာကွယ်ဆေးသည် အသက် ၆ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်အကြား အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်ခံစွမ်းအား အကောင်းဆုံးအချိန်နှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှု အတွေ့အကြုံရှိပြီးသူများလည်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း လိင်ဆက်ဆံမှု အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသူများလောက် ထိရောက်မှု မရှိနိုင်ပါ။
9-Valent HPV ကာကွယ်ဆေးကို လက်မောင်း သို့မဟုတ် ပေါင်၏ ကြွက်သားတစ်သျှူးအတွင်း ထိုးသည်။ သင်လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုအကြိမ်အရေအတွက်သည် အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်၏ အသက်အရွယ်အပေါ် မူတည်သည်။
အသက် အကြိမ်ပေါင်း အစီအစဉ်
၉-၁၄ နှစ်* ၂** ပထမအကြိမ်ထိုးခြင်း : ပထမအကြိမ်ဆရာဝန်ရက်ချိန်းတွင်
ဒုတိယအကြိမ်ထိုးခြင်း : ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် ၆-၁၂ အတွင်း
၃ ပထမအကြိမ်ထိုးခြင်း : ပထမအကြိမ်ဆရာဝန်ရက်ချိန်းတွင်
ဒုတိယအကြိမ်ထိုးခြင်း : ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် နှစ်လ
တတိယအကြိမ်ထိုးခြင်း : ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် ခြောက်လ
15-45 years3ပထမအကြိမ်ထိုးခြင်း : ပထမအကြိမ်ဆရာဝန်ရက်ချိန်းတွင်
* ဆေးအကြိမ်အရေအတွက် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ဆရာဝန်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မူတည်သည်။
** ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးကို ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် ၅ လထက်စော၍ ထိုးပါက တတိယအကြိမ် ကာကွယ်ဆေးကို ဒုတိယအကြိမ်ထိုးပြီးနောက် အနည်းဆုံး ၄ လအကြာတွင် ထိုးရန် လိုအပ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ဤကာကွယ်ဆေးသည် ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ မရှိပါ။ မပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဥပမာ နာကျင်ခြင်း၊ ပျို့အံခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးထိုးသည့်နေရာတဝိုက်တွင် နီရဲခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ဖျားခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ မောပန်းခြင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်းများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤလက္ခဏာများသည် တခဏသာ ကြာမြင့်ပြီး ဆေးကုသမှု မလိုအပ်ဘဲ ပျောက်သွားမည်။
9-Valent HPV ကာကွယ်ဆေးကို 9-Valent သို့မဟုတ် 4-Valent HPV ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုနှင့် ဓာတ်မတည့်သည့် တုန့်ပြန်မှုရှိသော လူနာများနှင့် တဆေးဓာတ်မတည့်မှုပြင်းထန်သည့် လူနာများကို မထိုးသင့်ပါ။
လက်တွေ့လေ့လာမှုများအရ 2-valent သို့မဟုတ် 4-valent HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ် ပြီးဆုံးပြီးနောက် 9-valent HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည် အန္တရာယ်ကင်းဝေးကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နောက်ထပ် ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်
လိုအပ်ခြင်းရှိမရှိ သို့မဟုတ် အကြံပေးသင့်မသင့် ဆရာဝန်မှ နောက်ဆုံးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်မည်။
သင့်တွင် အခြားအချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ဘမ်ရွန်ဂရက်ဆေးရုံ ဆေးဝါးအချက်အလက်စင်တာမှ မေးခွန်းများ ဖြေကြားရန် တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ အဆင်သင့်ရှိသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ပိုမိုရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဘမ်ရွန်ဂရက်ဆေးရုံ ဆေးဝါးအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုသို့
ဆက်သွယ်ပါ။ ဖုန်း : +၆၆(၀) ၂ ၀၁၁ ၃၃၉၉ အီးမေး : [email protected]
NIPT စစ်ဆေးခြင်း:မိခင်ဖြစ်လာတော့မည့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက် စိတ်အေးချမ်းစေနိုင်ခြင်း
ကိုယ်ဝန်စရှိပြီဆိုတဲ့ အချိန်လေးမှစ၍ နောက်ထပ် ၉လကြာ အတွေ့အကြုံကတော့ ဘဝရဲ့ အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက်လေးတွေထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ မိခင်ဖြစ်လာတော့မယ့် မိခင်လောင်းများနဲ့ ဖခင်ဖြစ်လာတော့ ဖခင်လောင်းများဟာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ မမွေးဖွားလာသေးတဲ့ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေး ကို ထိပ်ဆုံးကနေ ဦးစားပေးလာကြပါတယ်။